ज्योतीको उत्ताउलोपन,खुलेका पहिरनमा कति आकर्षित?::kamananews
ज्योतीको उत्ताउलोपन,खुलेका पहिरनमा कति आकर्षित?
गायिका ज्योती मगर नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो हाउभाउको कारण बढी चर्चित छिन् । ज्योती मगरको पहिरन र हाउभाउले बढी चर्चा पाउँछ । सामाजिक संजादेखि स्टेज कार्यक्रममा उनको उत्ताउलोपनाले चर्चा पाउँछ । ज्योती गीत गाउँदा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द बढी प्रयोग गर्छिन् । खुलेका पहिरन त उनको विशेषता नै हो ।
उनै, ज्योती मगर समय समयमा सामाजिक संजालमा हट फोटो राखेर पनि चर्चामा आउँछिन् । विशेषगरि, माथिल्लो भाग अत्याधिक खुलेको तस्बिर राख्दै ज्योतीले फ्यानको ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
उनै, ज्योती खुलेको पहिरनमा तस्बिर राख्दै लेखेकी छिन्–‘कसैले पनि मेरो उत्ताउलोपन सम्हाल्न सक्दैन ।’ ज्योतीले यो क्याप्सन लेखेर के कुराको संकेत गर्न खोजेकी हुन् यो त उनले नै जानुन् । तर, उनको उत्ताउलोपन सम्हाल्ने मान्छे कहिले भेटिएला ?